https://rakhainemray.wordpress.com သို့လာ ရောက်ကြည့်ရှုကြသည့် မိတ်ဆွေများ စာမျက်နှာ အသစ်ပြောင်းလိုက်သည့်အတွက် အောက်ပါ လိပ်စာကို လာရောက် ကြည့်ရှုကြပါရန် မေတ္တာရပ် ခံအပ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကုလ-ငြိမ်းချမ်းရေးတပ် စေလွှတ်ဖို့ အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံ အဖွဲ့ ၀င် နိုင် ငံတွေ အတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် လာမယ့် သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတကာ စည်းဝေး ပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပမယ်လို့ မလေးရှား Bernama သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံ အဖွဲ့ ၀င် နိုင် ငံတွေ အတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် လာမယ့် သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတကာ စည်းဝေး ပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပမယ်လို့ မလေးရှား Bernama သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ်တွေအတွက် လူသားချင်း စာနာတဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ ထောက်ပံ့ ကူ ညီနိုင်အောင် အဖွဲ့ကြီးတစ်ခု ဖွဲ့စည်းဖို့ စည်းဝေးပွဲ ကျင်းပတာ ဖြစ်ကြောင်း မလေး ရှား နိုင် ငံတကာ အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။
စည်းဝေးပွဲ ကျင်းပမယ့်နေရာကို မကြာခင် ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းက အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အစ္စလာမ် အဖွဲ့အစည်းတွေ တက်ရောက်ကြဖွယ် ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီအတွင်း နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်း ဖက်မှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကြားသိနေရတဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ လူသားချင်း စာနာမှု ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကို ၀င်ခွင့် ပေးသင့်ကြောင်း သတင်းဌာန တစ်ခုနဲ့ မေးမြန်းခန်း တစ်ခု မှာ ပြောဆိုပါတယ်။
ထိခိုက် သေဆုံးသူတွေနဲ့ နေရာပြောင်းရွှေ့ခံရသူ အရေအတွက် ကို မေးမြန်းရာ မှာတော့ ဒေ သတွင်းကို ၀င်ခွင့်မရတဲ့အတွက် အတိမကျ မသိရကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့ကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် ချီတက်လာသူ (၆)ဦး ထောင်ဒဏ်(၁၀)နှစ်ချမှတ်
ဓါတ်ပုံ – နိဉ္စရာ
ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့က မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကဲ့သို့ ဘူးသီးတောင်မြို့ကိုလည်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရန် ချီတက်လာသူ ဘင်္ဂလီ(၆)ဦးကို ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် (၁၀)နှစ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း အမိန့်ချရာသို့ သွားရောက်နားထောင်ခဲ့သူများက ပြောကြားသည်။
”တရားခံခြောက်ဦးက ဇော်ကီးအာမက်ပါ (၆)ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၁၄၈)နဲ့ (၅၀၆)ဒုတိယပိုင်းတွေနဲ့ စွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၁၄၈)က ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော ဆူပူမှုတွင် သေစေနိုင်လောက်သော လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ (၅၀၆) ဒုတိယပိုင်းက အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ (၁၄၈)က ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ်နဲ့ ပုဒ်မ (၅၀၆)ဒုတိယပိုင်းက ထောင်ဒဏ် (၇)နှစ် စုစုပေါင်း (၁၀)နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ဥပဒေအရာရှိတစ်ဦးက Eleven Media Group ကို ပြောကြားသည်။
ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့က မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကဲ့သို့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင်လည်း ဘင်္ဂလီများက မြို့ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရန် ချီတက်လာခဲ့ကြပြီး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဘူးသီးတောင် ရဲစခန်းမှ စခန်းမှုးမှ မိမိကိုယ်ပေါ်တွင် လက်နက်၊ ဗုံးများတပ်ဆင်ကာ ချီတက်လာသော ဘင်္ဂလီလူအုပ်ကို ဆက်လက်မချီတက်ဘဲ နောက်ဆုတ်ရန်ပြောကြားကာ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု မဖြစ်ပွါးအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်ဟု Eleven Media Group အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
Hmuu Zaw FB မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုများ လျော့ကျလာပြီး ယင်းသို့ လျော့ကျလာခြင်းမှာ အစိုးရသစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့်၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခွင့် အစရှိသော နိုင်ငံသားများ၏ မူအခွင့်အရေးများသည်လည်း အသစ်ပြဌာန်း လာသည့် ဥပဒေများနှင့်အတူ ပွင့်လန်းလာခဲ့သည်။ သေချာတာတစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် Freedom From Fear ကို ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေသစ်တွင် ပိုမိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာမည့် အနေအထားကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုတို့၏ အသက်ဝင် လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုမိုခိုင်မာလာမည့် အနာဂတ်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ကြာဆုံးသော ပြည်တွင်းစစ်များသည်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတစ်ခုမှလွဲ၍ ယမ်းငွေ့များ လွင့်ပြယ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်း မြောက်ပိုင်းမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရောင်နီများ ပြူထွက်လာစေရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသည်ကို အားတက်ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်နို်င်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စသည် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ၏ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ကျည်ဆန်တစ်တောင့် ဖြစ်ဖွယ်ရှိနေသည်။ ယင်းကိစ္စမှလွဲ၍ အခြားကိစ္စရပ် များ၌ ပြစ်တင်ဝေဖန်စရာ တစ်စထက်တစ်စ နည်းပါးလာသော လက်ရှိ အချိန်အခါတွင် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ နောက်ဆုံးတိုက်ကွက်မှာ ပြင်းထန် မည့်အလားအလာ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤတစ်ပွဲသည် ယင်းတို့အတွက် နောက်ဆုံးသော ကောက်ရိုးတစ်မျှင် ဖြစ်နေသလို မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက်မူ အပြင်းထန်ဆုံးသော တိုက်ပွဲအဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်ကာ အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်သွားရန် ရှိပါလိမ့်မည်။ အဓိက အားထားရာမှာ ဘူမိနက်သန် ကျွန်တော်တို့ မြေတွင် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်များ မြင့်မားပြင်ထန် ရှင်သန်နေရေးပင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိပါမည်။
သောတုဇနဘိက္ခူနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ ကြေငြာချက်
ဖြေရှင်းရမယ့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ
Burma Democracy Forum – 07-22-2012
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းခံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ အခြေစိုက် Burma Campaign UK အဖွဲ့က မဝေနှင်းပွင့်သုန် ကို ဦးသန်းလွင်ထွန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း သုံးသပ်ဆွေးနွေး ထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပဋိပက္ခပြဿနာ တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့  မူရင်းဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ နောက်မှာဝင်လာသူတွေဆို တဲ့ ဘာသာကွဲပြား စကားမတူတဲ့ ဘင်္ဂါလီနွယ်ဖွားတွေကြားမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာရှိနေခဲ့တဲ့ မုန်းတီးမှုနဲ့ သံသယမီးပွားတွေ ထပြီးတောက်လောင်ခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်စေချင်တဲ့ ဒီလူ အစု၊ လူအဝေးကို ဒေသခံတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုး၊ ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကြောင့် သံသယကြီးစွာနဲ့ မယုံကြည် လက်မခံနိုင်ခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့  အစဉ်အဆက် ကိုင်တွယ်မှုမှားယွင်းမှု အပြင်၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ် ဥပဒေအားနည်းချက်၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု စသဖြင့်လည်း ထောက်ပြမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လန်ဒန်မြို့ မှာ ရှိနေတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့က မဝေနှင်းပွင့်သုန် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ မဝေနှင်းပွင့်သုန်ဟာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေးရဲ့  သမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ ကျမအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် – အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့အရာကို လုံးဝယုံကြည်ချက် မရှိဘူးရှင့်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာက တော်တော်များများ ပြောတဲ့လူတွေကတော့ ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေဖက်ကလည်း ပြောတဲ့လူတွေရှိသလို။ ဒီလိုမျိုး ရခိုင်ပြည်သူတွေဖက်မှာနေနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖက်ကနေ ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ ကျမအနေနဲ့ကတော့ တယောက်နဲ့တယောက် အမြင်ချင်းမတူတာ၊ ဘာသာချင်းမတူတာ။ အကိုပြောသလို ဒါက နှစ်တွေ၊လတွေ များစွာ စုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာ။ အခုအချိန်မှာ အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆို ရင် ဒါကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ပြဿနာ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ဘာတူညီလဲ။ ကိုယ်နဲ့ ဘာကွဲခြားသလဲဆိုတာကို ကြည့်မှာထက်။ တူညီတဲ့နေရာကနေ စပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုး ငြိမ်းချမ်းစွာနေသွား သင့်သလဲ။ ဘယ်လိုမျိုး နိုင်ငံကို။ လူမျိုးရေးပြီးတဲ့အခါကြတော့ ဘာသာရေးပိုထွန်းကားလာအောင်၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးကာကွယ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုမျိုး လုပ်မလဲဆိုတာတွေက အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက မဝေနှင်း အခုနပြောသလို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နည်းနဲ့ အဖြေရှာသင့်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခုပြဿနာရဲ့  အရင်းခံကို အများစုသုံးသပ်တာကတော့ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားပြဿနာ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ သတ်မှတ်ပြီး အခေါ်ခံနေရတဲ့လူစုကို ရိုဟင်ဂျာအနေနဲ့ မခေါ်ချင်ဘူးဆိုကတည်းကိုက ဘယ်လိုလုပ် ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ချင်ဘူး။ ရတယ် ကိစ္စမရှိဘူး။ ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင် မင်းတို့ ဘယ်လို ခေါ်ချင်သလဲ။ ဆွေးနွေးမှုဆိုတာ အဲဒီလို စတင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာက သူတို့အနေနဲ့က ကျမတို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရယ်လို့ မပြောပါနဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာမူစလင်လူတွေ ကိုယ်တိုင်က တချို့ ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့လူတွေ အခုအချိန်အထိ ရှိနေတုန်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ရဲ့  မိသားစုအခြေအနေကြောင့်။ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ပြီးတဲ့အခါကြရင် ပိုက်ဆံမရှိတာလား။ ပြီးတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာ နေထိုင်တာလဲ။ အဲဒီလိုမျိုး ကွဲခြားပြီး မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့လူတွေ ရှိနေတုန်းပဲ။ ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ တရားမဝင်လာနေထိုင်ဆိုပြီးထားပါအုန်း။ တရားမဝင်လာနေထိုင်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့က လူမဟုတ်တော့ ဘူးလား။ သူတို့အနေနဲ့ ကျမတို့မှာရှိနေတဲ့ လူအခွင့်အရေးမျိုး သူတို့အနေနဲ့ မပိုင်ဆိုင်သင့်ဘူးလား။ မင်းက ငါနဲ့ ဘာသာမတူဘူး။ မင်း ဒီနိုင်ငံက မဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူတို့ကို ကျမတို့ သတ်တော့မလား။ ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက် နည်းနဲ့ သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့က တိရစ္ဆာန်ထက်မခြားတော့ဘူးလေ။ အဲဒီလိုမျိုးတွေလည်း ကျမတို့ ကြည့်သင့်တယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ကျနော်တို့မြင်တာကတော့ ဘယ်ဖက်ကမှ တကယ်တမ်း အကြမ်းဖက်ချင်ကြတဲ့ ဆန္ဒ တော့ ရှိချင်မှ ရှိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း လက်တွေ့ ဒေသအတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ လှုံဆော်မှုတွေ ကြောင့် ဒါက မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်ရတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတင်းပေးပို့ကြတဲ့၊ ကောလဟာလဖြန့်ကြတဲ့ ကိစ္စတွေကလည်း တဖက်နဲ့တဖက် နစ်နစ်နာနာဖြစ်အောင် လှုံဆော်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိနေကြခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေဟာ နာကြည်းစရာ ပိုဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီပြဿနာဟာ စောစောက မဝေနှင်း ပြော သလိုပဲ နိုင်ငံသားပြဿနာ။ အဲဒီတော့ အနှစ်နှစ်အလလ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့  အဆက်ဆက်ရဲ့  ပေါ့လျော့မှု တွေ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်တည်းမှုဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေရဲ့  မမျှတမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မဝေနှင်းတို့ရဲ့  အဖေ ဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေးတို့အပါအဝင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ ဗမာပြည်က နိုင်ငံရေးသမားတွေ အတော်များ များက ဒီအချက်ကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ဖြစ်တည်မှုကိုတော့ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး တော့ တွင်တွင်ကြီးငြင်းနေတာကို ကျနော်တို့ ကြားရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ တိုင်းရင်း သားအခွင့်အရေး အခုလောလောဆယ် အခြေအနေအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အခြေအနေအရ ဘာတွေများ ကွာ တယ်လို့ ယူဆပါသလဲ။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ ကျမအမြင်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အခုန အကိုပြောသွားသလိုပဲ ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ အဓိကနေရာကတော့ ပိုပြီးတော့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့ဥစ္စာက မီဒီယာပေါ့။ အထဲက မီဒီယာပဲပြောမလား။ အပြင်က မီဒီယာပဲ ပြောမလား။ သူတို့တွေက ပိုပြီးတော့ ဆွပေးတယ်။ ဆွပေးတဲ့နေရာမှာ တချို့ နေရာတွေမှာဆိုရင် စကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေ။ ပြီးတဲ့အခါကြတော့ ပြောတာဆိုတာက တကယ်ကို ပညာတတ်လို့ ယူဆလို့မရအောင် ရေးသားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြွပေးတယ်။ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်လည်း လူတွေက လိမ်ပြီးတော့ သတင်းမမှန်တာကို ပိုပြီးတော့ ယုံကြည်ချင်ကြတယ်။ ဒါကို ကျမအနေနဲ့ နားလည်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးဆိုတော့ ဘယ် သူမဆို ကျမတို့ နိုင်ငံကို ထိခိုက်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို နာမယ့်ကိစ္စပဲလေ။ ဆိုတော့ မီဒီယာကလည်း အဲဒါ မျိုးကို ဆွပေးတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲက လူတော်တော်များများ ယုံကြည်တာက၊ အပြင် ကလူတွေပါပါတယ်။ ယုံကြည်တာက ဘာလဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအရေးလို့ ပြောလာတဲ့အခါကြရင် သူတို့ ထင်တာက သူတို့က နိုင်ငံတနိုင်ငံလိုချင်တယ် သူတို့အတွက်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးလို့ တောင်းတဲ့အခါမှာ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံ တည်ဆောက်ဖို့တောင်းတာပဲ။ သူတို့ မူစလင် နိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတယ် ဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး စွပ်စွဲတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ ကျမတို့ Burma Campaign UK ဆိုလို့ရှိရင် စွပ်စွဲခံရတာ ကျမတို့က အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ပိုက်ဆံတွေ ကျမတို့ရတယ်။ ရတဲ့အခါကြတော့ ကျမတို့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ကျမတို့က အားသွန်ခွန်စိုက်လိုက်ပြီးတော့ တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ ပိုက်ဆံတပြားမှ မရပါဘူး။ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာအရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာ။ ကျမတို့အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလို့ ယုံကြည် တယ်။ ကရင်အရေးလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ ကချင်အရေးလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသား၊ ဘာသာ၊ လူမျိုးမရွေး ကိစ္စတွေကို ကျမတို့ လုပ်ခဲ့တယ့်အတွက် ဒီကိစ္စကလည်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာ။ နောက်တခု နိုင်ငံ သားအရေးလို့ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကုလသမဂ္ဂအခြေခံ UN Declaration of Human Rights မှာ ပြောခဲ့တာက ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီခလေးတယောက်က မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့က နေ့ချင်းညချင်း နိုင်ငံသာခွင့် သူမှာရှိပြီသာ။ ရှိပိုင်ခွင့် ရှိကိုရှိတယ်။ ခလေးတိုင်းက သူတို့မှာ နိုင်ငံသားခွင့်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးခဲ့တဲ့ တရုတ်လူမျိုး၊ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမွေးတဲ့ မူစလင်နိုင်ငံသားတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဘာသာနိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံသားခွင့်ဆိုတာ သူတို့မှာရှိသင့်တယ်။ ဘာသာရေးမတူတာနဲ့ နိုင်ငံသားခွင့် မရှိတော့ ဘူး ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျမတို့ ဒီကိစ္စကိုတော့ သေသေချာချာ ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်ရမယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုစောစောက မဝေနှင်း ပြောသွားတဲ့ Burma Campaign UK ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့။ ဒီအဖွဲ့ဆိုရင် အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  အရေးကို နောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်လာတာလည်းတွေ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှပါလီမန်မှာ သွားပြီးတော့ တင်ပြမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ Burma Campaign UK အဖွဲ့ရဲ့  ပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့တွေက သွားပြီးတင်ပြတဲ့အခါမှာ။ အဲဒီနေရာတွေမှာ တချို့ သော ဥပမာ တချို့ သော ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့တွေရဲ့  တင်ပြမှုတွေထဲမှာ တချို့ သောကိန်းဂဏန်းတွေက ပြည်တွင်းမှာ အခုလက်ရှိ အနေအထားအရ အသတ်ခံရတဲ့ လူပေါင်း ထောင်ချီပြီး ရှိနေပါပြီဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုး။ ဒါမျိုးတွေကြတော့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လှုံလှုံ ရှိရဲလား။ ဒါမျိုးတွေက ဒီလိုမျိုး တင်ပြတာကိုကြားတဲ့အတွက် တဖတ်ကနေ စိတ်ဆိုးစရာ၊ ဒေါသဖြစ်စရာ ပိုပြီးမဖြစ်စေ ဘူးလား။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ ကျမတို့ Burma Campaign UK အနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာအရေးကို လုပ်လာ တယ်ဆိုတာ ကျမတို့အဖွဲ့ အစည်းတခုတည်း ဒီကိစ္စကို လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တဲ့ Christianly Solidarity World Wide နဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်း Amnesty ဆိုလည်း ဒီကိစ္စကို ထောက်ခံတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနံပတ်၊ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်နှစ်ယောက် ထိခိုက်ပြီးတော့၊ ဘယ်နှစ်ယောက် သေဆုံးနေတဲ့ကိစ္စကိုတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ သူတို့ကို သေချာကို အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်အောင် ပြခိုင်းပါတယ်။ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ – တချို့ ကြတော့လည်း တကယ်တမ်း သိပ်ပြီးတော့ experien ce မရှိတဲ့အခါကြတော့ ဟိုရောက်တဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့ ပြီးတော့ ပြောတဲ့နံပတ်တွေကလည်း မှားရင် လည်း မှားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ပါလီမန်မှာ ဗြိတိသျှလွှတ်တော်မှာ အမတ်တွေနဲ့သွားပြီး တွေ့တဲ့ အခါကြရင် သူတို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါကြရင် သေချာတဲ့၊ ခိုင်လုံမှုရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကျမတို့သွား တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ပြဿနာက ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် နှစ်ဖက်စလုံး ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဖက်နဲ့ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေဖက်ကရော ဒီဖက်မှာရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိနေ တဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ ဘယ်သူတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပြု မှန်ကန်တဲ့ တင်ပြချက်တွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ပိုပြီးအ ရေးကြီး တယ်လို့ မယူဆဘူးလား။ နို့မို့ဆိုရင် ပြဿနာက တဖက်နဲ့တဖက် ပိုပြီးတော့ အထင်လွှဲမှားမူတွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေ ပိုဖြစ်ဖို့ ရှိနေတယ်လို့ မယူဆဘူးလား။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ ဒါကတော့ ဟုတ်တာပေါ့။ ကျမတို့အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဥစ္စာကို အဓိကထားပြီးတော့ သွားရ မှာလေ။ ကျမတို့အနေနဲ့ သေသေချာချာ အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရှိမှသာ ကျမတို့သွားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ဥပမာ လန်ဒန်မှာ ပြဿနာ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအရေးဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့အနေနဲ့ ဖြစ်စေ ချင်တာက ရခိုင်ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေကိုလည်း လာစေချင်တယ်။ ပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့။ ဒီလိုမျိုး Facebook, အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဆဲဆိုရေးတဲ့ဟာတွေ။ ပြီးတော့ တဖက်သတ် စွပ်စွဲတာဟာတွေထက်ဆရင် လာပါ။ အကယ်၍ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ရတယ့်ဟာမျိုး။ မင်းတို့ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုမျိုး ခေါ်တာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ မင်းတို့ ဒီလိုမျိုး ယုံကြည်ချက် ဖြစ်တာမျိုးလည်းဆိုတာ။ ဒီလိုမျိုး မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြေရှင်းတဲ့ အခါ မျိုးကြရင် ပိုပြီး ထိရောက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောင်းလဲလာပြီ။ အခြေအနေလေးတွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကြတော့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ကို သွားနေတယ်လို့ ကျမယုံကြည်တယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကို သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့အနေနဲ့ ဘယ်သူကိုမှ အနောက်ထဲမှာ ထားခဲ့လို့မရဘူး။ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူလို့လား ကျမတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်သွားမလဲ။ အဲဒီဥစ္စာ ကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးတော့ တူညီတဲ့နေရာလေးတွေက စရမှာပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ယတိပြတ် ပြောဆိုနေတဲ့အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ အဲဒီဥစ္စာက ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ယတိပြတ်ပြောဆိုနေတဲ့ အချက် အလက်တွေက တချို့ ကြတော့ သူတို့အနေနဲ့လည်း သေချာအချက်အလက် မပေးနိုင်ဘူး။ ကျမအဖေ ပြော သွားသလို ကျမအနေနဲ့ ငယ်တယ်။ ကျမအနေနဲ့ သေချာသိချင်မလဲသိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့  ယုံကြည်ချက်က ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်သင့်တယ်။ ထားပါတော့ သူတို့ တရား မဝင် ဝင်လာတယ်လို့ စွပ်စွဲတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ တရားမဝင် ဝင်လာတာနဲ့ ဒီခလေးတွေကို ကျမတို့ ပညာသင်ပိုင်ခွင့် မပေးနိုင်တော့ဘူးလား။ ဒီ ခလေးတွေကို ကျန်းမာရေးပတ်သက်တဲ့ စောင့်ရှောက်ခွင့် တွေ မပေးတော့ဘူးလား။ ဒီ ခလေးတွေက တကယ်တမ်းကြတော့ ကြားထဲက မြေစာပင်ဖြစ်ရတဲ့ ဘဝမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုပြီး လက်ကိုင်ထားပြီးတော့ ပြောနေတဲ့လူတွေ ခဏတော့ စဉ်းစားသင့် တယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ငါတို့အတွက်ပဲ ဖြစ်သင့်သလား။ သူတို့အတွက်ကော မဟုတ်ဘူး လားဆိုတာကို ကျမတို့ သေသေချာချာ မျက်စိဖွင့်ပြီး ကြည့်သွားဖို့ လိုပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုဟာက မဝေနှင်း ပြောနေတာက နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စပေါ့။ အဲဒီတော့ စောစောက ကျနော် မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းအတိုင်းပဲ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုတာ အခုအချိန်မှာ ဘာများပိုလို့လဲ။ သဘောကတော့ သူတို့ကို ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေလို့ မခေါ်ပါနဲ့ သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ပါဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်ပေါ့။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ သူတို့အနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီလို့ ခေါ်လား။ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာ ကျမအနေနဲ့ နံမည်တွေ ကို ခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးလာတဲ့လူတွေကြတော့ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ ကျမတို့ အခုဆိုလို့ရှိရင် ကုလားဆိုတဲ့ဟာက ရိုဟင်ဂျာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးလာတဲ့လူတွေကိုတောင်မှ ကုလားလို့ အခေါ်ခံထိတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘာသာ ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အများစုက အခေါ်မခံချင်တဲ့ ကုလားဆိုတာကိုတော့ ခေါ်ကြတယ်။ အခေါ်ခံချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုတော့ မခေါ်ချင်ကြဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
မဝေနှင်းပွင့်သုန် ။ ။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုလို့ရှိရင်။ ကျမဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာအနေနဲ့ ကြီးလာတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမကို ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမမှာ ရိုဟင် ဂျာ ယောက်ျား ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျမဟာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက် လုပ်နေတယ်။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး စွပ်စွဲခံရတယ်။ ကျမတို့ တကယ်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပြန်ကြည့် မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မုန်းတီးမှုက ဘာသာရေးကစတာလို့ပဲ ကျမမြင်မိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ လန်ဒန်မြို့ မှာရှိနေတဲ့ Burma Campaign UK က မဝေနှင်းပွင့်သုန် ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
Amnesty Int’l: Myanmar’s Rohingyas being targeted
Amnesty International accuses both security forces and ethnic Rakhine Buddhists of carrying out new attacks against Muslims, specifically Rohingya – AP
In this Monday June 11, 2012 file photo, local residences take refuge atamonastery in Sittwe, capital of Rakhine state in western Myanmar, where sectarian violence is impacting on the local population, (Photo: AP).
Communal violence is grinding on in western Myanmar six weeks after the government declaredastate of emergency there, and Muslim Rohingyas are increasingly being hit with targeted attacks that have included killings, rape and physical abuse, Amnesty International said.
A government spokesman for coastal Rakhine state, which was engulfed byawave of bloody unrest in June, called the allegations made Friday groundless and biased. Amnesty’s claims are “totally opposite of what is happening on the ground,” spokesman Win Myaing said, adding that the region was calm.
Also Friday, the new US ambassador to Myanmar announcedadonation of $3 million in food aid to northern areas of the country affected by fighting between government troops and ethnic militias.
Afteraseries of isolated killings starting in late May that left victims on both sides, bloody skirmishes quickly spread across much of Myanmar’s coastal Rakhine state. The government declaredastate of emergency June 10, deploying troops to quell the unrest and protect both mosques and monasteries. Authorities said at least 78 people were killed and thousands of homes were burned down or destroyed — with the damage roughly split evenly between Buddhists and Muslims.
The worst of the violence subsided late last month, but communal violence has ground on. Now, Amnesty said, it is being directed mostly at the Rohingya population.
Attacks over the last six weeks have been “primarily one-sided, with Muslims generally and Rohingyas specifically the targets and victims,” Benjamin Zawacki,aBangkok-based researcher for Amnesty, told The Associated Press. “Some of this is by the security forces’ own hands, some by Rakhine Buddhists with the security forces turningablind eye in some cases.”
The group also said security forces, including the police and the army, had conducted massive sweeps and detained hundreds of Rohingyas who are being held “incommunicado.”
Win Myaing, the government spokesman, said security forces had arrested at least 100 Muslims in the northern Rakhine state town of Maungdaw, but he said the arrests were not discriminatory. Muslims account for more than 95 percent of the population in the town, he said, and it is natural they would comprise most of the arrests there.
Iran urged the United Nations to take action to protect the Rohingyas.
“We believe that ethnic and religious cleansing against Muslims under whatever pretext is unjustifiable and inexcusable under international law, and the United Nations must take urgent measures” to protect the Rohingyas by calling on Myanmar’s government to end its “crackdown,” Iran’s UN ambassador, Mohammad Khazaee, said inaletter Friday to UN Secretary-General Ban Ki-moon.
Ambassador Derek Mitchell announced at the US Embassy Friday that the $3 million food aid donation for displaced people in Shan and Kachin states in northern Myanmar would be delivered through the UN World Food Program.
It was Mitchell’s first press briefing since he took his post earlier this month as the first US ambassador to Myanmar in two decades. Washington restored full diplomatic relations with Myanmar and eased sanctions in response to reforms initiated after the long-ruling military ceded power last year.
The US already had announced earlier this month another $3 million aid package for humanitarian needs in Rakhine and Kachin states and disaster risk reduction.
The violence in Rakhine constituted some of the country’s deadliest sectarian bloodshed in years and raised international concerns about the Rohingyas’ fate inside Myanmar.
Many people in Myanmar don’t recognize Rohingya as legitimate settlers, though those of Bengali heritage who came in the 19th century, when Myanmar was under British rule and called Burma, are regarded as full citizens. Those who entered after Myanmar became independent in 1948 are considered illegal immigrants.
Bangladesh, for its part, also denies the Rohingya citizenship, arguing that they have been living in Myanmar for centuries and should be recognized as citizens there instead.
Amnesty called on Myanmar to accept the Rohingya as citizens.
“Under international human rights law and standards, no one may be left or rendered stateless,” Zawacki said. “For too long Myanmar’s human rights record has been marred by the continued denial of citizenship for Rohingyas andahost of discriminatory practices against them.”